Warshad Twill - Shiinaha Soosaarayaasha Twill, Alaab-qeybiyeyaal
Ss Medical Ma Xidhnayd Dhar
Caafimaadka Midkoodna Dhar-xidhka
Pp + Pu Dhar Maqaarka Protective
Pp + Pe Dharka Caafimaadka
Pp Spunbond Dhar aan Gogosha lahayn
Anaga oo ku dhegan fikirka ah "Abuuritaanka waxsoosaarka dusha sare iyo kasbashada asxaabta dadka maanta adduunka oo dhan", waxaan si joogto ah u dhignaa rabitaanka macaamiisha meesha ugu horeysa ee Twill,,,, Ku qanacsanaanta macaamilku waa ujeedkeena ugu weyn. Waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad xiriir ganacsi nagala sameysato. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Horumarkayagu wuxuu kuxiranyahay waxsoosaarka horumarsan, hibada cajiibka ah iyo xoojinta joogtada ah ee ciidamada teknolojiyadda ee Twill, Khibrada shaqo ee goobta waxay naga caawisay inaan xiriir adag la yeelano macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha labadaba suuqa gudaha iyo kan caalamiga ah. Muddo sanado ah, badeecadeenna iyo xalalkeenna waxaa loo dhoofiyay in ka badan 15 waddan oo adduunka ah waxaana si ballaaran u adeegsaday macaamiisha.
Twill waa nooc ka mid ah dharka dharka leh oo leh qaab ka soo jeeda feeraha isbarbar dhiga (oo ka duwan satin iyo weave cad). Tan waxaa lagu sameeyaa iyada oo la marinayo dunta weft ka badan hal ama in ka badan oo dunta dunta ka dibna ka yar laba ama in ka badan oo dun dunta ah iyo wixii la mid ah, iyada oo "tallaabo" ama dheellitirka u dhexeeya safafka si loo abuuro qaabka astaamo u gaar ah.
Dharka Twill -S20170302
ITwill waa nooc ka mid ah tolidda dharka oo leh qaab feeraha isbarbar dhigaya (oo ka duwan satin iyo weave cad). Tan waxaa lagu sameeyaa iyada oo la marinayo dunta weft ka badan hal ama in ka badan oo dunta dunta ka dibna ka yar laba ama in ka badan oo dun dunta ah iyo wixii la mid ah, iyada oo "tallaabo" ama dheellitirka u dhexeeya safafka si loo abuuro qaabka astaamo u gaar ah.